महिलाहरु आफ्नो इच्छा किन बताउँदैनन् ? - radionrn.com
महिलाहरु आफ्नो इच्छा किन बताउँदैनन् ?
अहिले अधिकांश महिलाहरु पुरुष सरह हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न थालेका छन् । आफ्नो क्षमता र लगनशीलताका कारण आज महिलाले गर्न नसक्ने काम केही छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् । आज हरेक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा महिला कुनै कुराले पनि कम छैनन् । यद्यपि महिलाहरु आज पनि आफ्नो इच्छा बताउन अफ्ठ्यारो मान्छन् । आज पनि कतिपय महिलाहरु क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । आफ्नो कुरा राख्न अथवा आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न हिच्किचाउने गर्छन् । के कारण महिलाहरु आफ्नो इच्छा र कुरा बताउन हिच्किचाउँछन् त ?
महिलाले स्कुल-कलेजमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर समाचार बने पनि जब जागिर र तलबको कुरा आउँछ, उनीहरु पछाडि पर्छन् । आफ्नो हक र अधिकार पनि उनीहरु सजिलै छोड्छन् । सरकारी जागिर बाहेक अन्य निजी कम्पनीहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको तलब कम हुन्छ । काम उस्तै भए तापनि तलबको कुरामा महिलाहरु पछाडि पर्छन् ।
एउटा पुरुषलाई कुन जागिर खाने भन्नेबारे आफ्नो परिवार र श्रीमतीलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन तर महिलालाई पढ्ने, काम गर्ने, कुनै काम सिक्न जान आफ्नो आमा-बुवादेखि दाइ, श्रीमान् र कुनै प्रसंगमा त समाजको समेत अनुमति लिनुपर्छ ।
यसरी महिला-पुरुष मिलेर हरेक कुराको निर्णय लिँदा घर-गृहस्थी राम्रोसँग चल्छ । महिलाहरुको आत्मविश्वास बढ्छ, पैसा र यससँग सम्बन्धित तनावहरु कम हुन्छ । त्यसैले महिला-पुरुष मिलेर नै वित्तीय योजनाहरु बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैले महिलाले वित्तीय योजनामात्र होइन जीवनको सम्पूर्णमहत्वपूर्ण निर्णयमा महिलाले पनि राय सुझाव दिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी महिलाले घरपरिवार साथै समाजमा आफ्नो स्थान प्राप्त गर्न सक्छिन् ।
“छालाको सुन्दरता जोगाउन” सुषमा महराका टिप्स